Dr. Tint Swe's Writings: Cortisone ကော်တီဇုန်းဆေး သတိနဲ့ပေး
၁။ ဆရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနောက်တိုင်းဆေးဝါးများကို အလွယ်တကူဝယ်၍ရနေသဖြင့် Dexamethasone နှင့် Prednisolone ကဲ့သို့သောဆေးများကို တွင်တွင်ကြီးသုံးစွဲနေကြပါသည်။ ထိုဆေးများကြောင့် ဒုက္ခရောက်သူပေါင်း မနည်းလှပါ။ ထို့ကြောင့် ထိုဆေးများ၏ဆိုးကျိုးကိုဗဟုသုတအဖြစ်ရေးပေးစေခြင်ပါသည်ဆရာ။
၂။ ဆရာရှင့် ကျမအသက်က ၂၉ နစ်ပါ။ သူနာပြုဆရာမတယောက်ပါ။ dexamethazone tablet ကိုလူတော်တော်များများ ထမင်းစားရေသောက် လွယ်လွယ်ကူကူသုံးနေကြပါသည်။ dexamethazone နင့်ပတ်သတ်၍ ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိချင်၍ ဖြေကြားပေးပါရှင့်။ လေးစားစွာဖြင့်။
၃။ Steroid ဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို ရှင်းပြပေးပါဆရာ။ limit dose နဲ့ long time usage လေး သိလိုပါတတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍ ရိုသေစွာဖြင့်။
၄။ Steroid ဆေးကို ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်လို့ ဆရာဝန်က ထိုးပေးနေပါတယ်။ ဆေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုး သိပါရစေဆရာရှင့်။
၅။ Hydrocortisone tablets ဘာအတွက်၊ ဘာရောဂါအတွက်ပေးတာလည်းဆရာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂ဝ ကျော်လောက်က dexamethasone သောက်ဘူးထားတယ်။ အနှစ် ၂ဝ လောက်သောက်ထားမိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လကျော်လောက် ကလည်း prednisone ပေးသောက်ခိုင်းတယ်။ ကျမကို တကြိမ်တခါလောက ဖုန်းဆက်ခွင့်ပြုပါ။ အဆက်အသွယ်ပြုလို့ ရမဲ့နံပါတ်ကလေး။
လူတွေမှာ ပိုးဝင်တာ။ ထိခိုက်မိတာ၊ ခွဲစိတ်တာ တခုခုဖြစ်ရင် ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ် ဆက်ဖြစ်လာတယ်။ အဲလိုဖြစ်လာချိန်မှာ ကိုယ်ကနေ ဓါတ်တွေထွက်လာမယ်။ အဲဒီဓါတ်တွေ ထွက်မလာစေအောင် ပေးတဲ့ဆေးကို စတီရွိုက်နဲ့ ကော်တီဇုန်းလည်း ခေါ်တယ်။
Hydrocortisone ဟိုက်ဒရိုကော်တီဇုံးဆိုတာ စတီရွိုက်ဆေးဖြစ်တယ်။ သိပ်အစွမ်းထက်ပြီး သိပ်သတိထား သုံးရတာမျိုး။ ခက်တာက ဆေးလက်မှတ်မပါဘဲ ဝယ်လို့ရတယ်။ အရေပြားမှာ ယားယံတာ၊ နှင်းကူနာ၊ အကောင် ကိုက်တာ၊ တခုခုနဲ့ မတည့်တာ၊ စအိုယားတာ၊ ခေါင်းယားတာ၊ စတာတွေအတွက် Hydrocortisone 0.5% or 1% ဆေးတွေ ဝယ်လို့ လွယ်တယ်။ တနေ့ ၁-၄ ကြိမ်သုံးရတယ်။ လိမ်းဆေးညှစ်ဘူး၊ ခရင်မ်၊ လိမ်းဆေးရည်၊ အရည်၊ ဂျဲလ်၊ စပရေး၊ အမြှုပ်၊ စအိုထဲထည့်ဆေး၊ ပါးစပ်ထဲထည့်ဆေး၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာတယ်။ ဆေးနာမယ်တွေကလဲ အမျိုးမျိုး။ ဒီဆေးကို ဆရာဝန် မညွှန်ဘဲ မသုံးသင့်ဘူး။ ဆေးကို များရာနေ တဖြည်းဖြည်ချင်းလျှော့ရတယ်။ တုံးတိမရပ်ရပါ။
1. Endocrine Disorders (အင်ဒိုခရိုင်း) ခေါ် ဟော်မုန်းရောဂါများ
2. Rheumatic Disorders (ရုမက်တစ်) ရောဂါများ
3. Collagen Diseases (ကိုလာဂျင်) ရောဂါများ
4. Dermatologic Diseases အရေပြားရောဂါများ
5. Allergic States (အလာဂျီ) ရောဂါများ
6. Ophthalmic Diseases မျက်စိရောဂါများ
7. Respiratory Diseases အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ
8. Hematologic Disorders သွေးရောဂါများ
9. Neoplastic Diseases ကင်ဆာရောဂါများ
10. Edematous States ကိုယ်ရောင်ရောဂါများ
11. Gastrointestinal Diseases အစလမ်းရောဂါများ
12. Miscellaneous အခြားရောဂါများ
1. Cirrhosis အသည်းခြောက်၊
2. Kidney disease ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊
3. Thyroid disorder လည်ပင်းကြီးရောဂါ၊
4. Diabetes ဆီးချို၊
5. Malaria ငှက်ဖျားဖြစ်ဘူးသူ၊
6. Tuberculosis တီဘီ၊
7. Osteoporosis အရိုးပါးရောဂါ၊
8. Myasthenia gravis ကြွက်သားအားနည်ရောဂါ၊
9. Glaucoma or Cataracts မျက်စိရေတိမ် + အတွင်းတိမ်၊
10. Herpes infection of the eyes မျက်စိ ရေယုံ၊
11. Stomach ulcers, ulcerative colitis, or diverticulitis အာလမ်းရောဂါတွေ၊
12. Depression or mental illness စိတ်ကျရောဂါ၊
13. Congestive heart failure နှလုံးအလုပ်မလုပ်ခြင်း၊
14. High blood pressure သွေးတိုးရောဂါရှိနေသူတွေကို အထူးသတိထားပေးရမယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ တလှေကြီးရှိတယ်။ အရေပြား ခြောက်ကွဲတယ်၊ ပါးတယ်။ ဝက်ခြံထွက်၊ ယားယံ၊ ပူလောင်၊ အရောင်ပြောင်း၊ အမွှေးပေါက်တာပိုများ၊ သွေးခြည်ဥမယ်။ အစာမကျေ၊ ဗိုက်အောင့်၊ ခေါင်းမူး၊ ပျို့-အန်၊ အိပ်ရေးပျက်၊ စိတ်ကျ၊ ရာသီထိန်နိုင်တယ်။ အသက်ရှူခက်၊ ရင်ကျပ်၊ အနာကျက်နှေး၊ ချွေးထွက်များ၊ ခေါင်းကိုက်၊ မျက်နှာ၊ လက်မောင်း၊ ခြေထောက်၊ လည်ပင်း၊ ရင်သားဖေါင်းပြည့်၊ ဒါကြောင့် ဝလာ၊ ရောင်လာ၊ ဖေါလာစေမယ်။ အလေးချိန်တိုးမယ်။
ဒီဆေးကို မတည့်သူတွေနဲ့ ဖန်းဂတ်စ် မှို ရောဂါရနေချိန်မှာ ဒီဆေးမျိုး မသုံးရပါ။ ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားထဲက ရောဂါပိုးအရှင်ကိုသုံးတာမျိုး ထိုးချိန်မှာလဲ ဒီဆေးမျိုးမပေးရပါ။ ကာကွယ်ဆေး အာနိသင်နည်းစေမယ်။ Measles, Mumps, Rubella (MMR), Bacillus Calmette-Guérin (BCG), Oral Polio, Rotavirus, Smallpox, Typhoid, Yellow fever, Varicella (Chickenpox), H1N1 influenza နဲ့ Nasal flu vaccine ကာကွယ်ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ ခုခံအားစနစ်ကို ယာယီအားနည်းစေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချိန်မျိုးမှာ ကူးစက်ရောဂါတွေ ဝင်လွယ်စေမယ်။ ရှိနေတဲ့ကူးစက်ရောဂါကို ပိုဆိုးစေနိုင်သေးတယ်။
ကော်တီဇုန်းဆေး ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံးပေးရရင် အထဲကကလေးကို ထိခိုက်မလားဆိုတာ မသေချာပါ။ မိခင်နို့ထဲ ပါနေနိုင်တယ်။ ကလေးဖွံ့ထွားမှုကို သက်ရောက်နိုင်တယ်။ Pregnancy and Prednisolone ကိုယ်ဝန်နှင့် ပရက်နဆိုလုံးကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကော်တီဇုန်းဆေးတွေက ဓါတ်ပြုနိုင်လို့ ဆေးတွဲပေးရာမှာ သတိထားရမယ်။ အက်စပရင်၊ ဆီးသွားစေတဲ့ဆေး၊ Warfarin သွေးကျဲဆေး၊ Cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune) ခုခံအားအတွက်ဆေး၊ ဆီးချိုဆေးများ၊ Ketoconazole (Nizoral) ဖန်းဂတ်စ်အတွက်ဆေး၊ Rifampin (Rifadin, Rifater, Rifamate, Rimactane) တီဘီဆေးများ၊ Phenytoin (Dilantin) or Phenobarbital (Luminal, Solfoton) အတက်သက်သာဆေးများ။
Dexamethasone ဒက်ဆာမီသဇုန်းဟာ Glucocorticoids ဆေးအုပ်စုဝင်တခုဖြစ်တယ်။ Steroid hormone ဆိုတာက ကော်တီဇုန်းဖြစ်တယ်။ လူကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်။ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာထုတ်တဲ့ Synthetic steroid hormones တွေကတော့
ဆေးက ချက်ချင်းဆိုသလို ထိရောက်တယ်။ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေရှိပေမဲ့ သုံးသင့်သူကို ပေးရတယ်။ စားဆေး၊ ထိုးဆေး၊ မျက်စဉ်း၊ နှာခေါင်ထဲထည့်ဆေး၊ အဆစ်ထဲထိုးဆေး စတာတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အလာဂျီ ခေါ် တခုတခုနဲ့ မတည့်တာ၊ ရှော့ဖြစ်တာတွေမှာ အရေးပေါ်နဲ့ အသက်ကယ်ဆေးလိုသုံးရတယ်။ နာတာရှည်ဖြစ်တာတွေမှာ ပေးရတယ်။
မှိုရောဂါရှိနေစဉ်မှာ ဒီဆေးမသုံးရပါ။ ကျောက်ကပ်၊ အူ၊ နှလုံးရောဂါရှိနေသူ၊ ဆီးချို၊ လည်ပင်းကြီး၊ သွေးတိုး၊ ရေယုံ၊ တီဘီရောဂါရှိနေသူတွေ ဒီဆေးသုံဘို့ အထူးသတိထားရမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ချိန်လဲ သတိပြုပါ။ ဒီဆေးက အရက်နဲ့မသင့်ပါ။ ဆေးပေးထားသူတွေကို ဆားလျှော့စားဘို့၊ ပရိုတင်း နဲ့ ပိုတက်စီယမ် များများစားဘို့ ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားမယ်။